Ruwanda: Madaxweyne Paul Kagame oo markii 3aad la doortay – Kasmo Newspaper
Ruwanda: Madaxweyne Paul Kagame oo markii 3aad la doortay
Updated - August 5, 2017 11:29 am GMT
London (Kasmo),Dalka Ruwanda waxaa Jimcihii 4ta Agosto, dad gaaraya 7 malyuun u dareereen doorashooyinkii Madaxweynaha, iyada oo dadka qurba-joogta ah codeeyeen maalintii khamiista ee ka horreysay.
Madaxweynaha xilka haya Paul Kagame ayaa markii 3aad ku guulaystay xilka, (ka dib markii Aftidii dadweyne ee 2015kii loogu oggolaaday in uu tartami karo), aqlabiyad 89% ah, waxaana la tartamay 2 xubnood oo kala ah Frank Habineza oo helay 0,45% iyo Philippe Mpayimana oo helay 0,75%.
Habineza waa guddoomiyaha xisbiga qur ah ee mucaaradka ah ee dalka laga oggolyahay Pdv (Parti Democratique Vert) oo garabka bidix, kaas oo dalka masaafuris uga maqnaa 2010-2012kii, musharraxa kale waa nin Warfidiyeen hore ahaa oo si madaxbannaan u tartamaya.
Kagame wuxuu taariikhda casriga ah ee Ruwanda ku leeyahay kaalin mug weyn, waxaana loo haystaa nin ka soo saaray dalkiisa mugdigii dagaallada soona gaarsiiyay Ruwanda xilliga Digitaalka. Wuxuu bartamihii July 2014kii hoggaaminayay Maleeshiyadii RPF (Ruwandan Patriotic Front) ee soo afjartay xasuuqii Tutsi-ga iyo dagaalladii sokeeye.
Tan iyo markii uu xilka qabtay Ruwanda waxay ku tallaabsatay dib-uheshiisiin, horumar dhaqaale iyo xasillooni ballaaran, iyada oo dhakhliga guduhu sare u kacay 7,6%, dalkuna noqday mid ka mid ah dalalka Afrika ee sida sahalka ah loo maalgashan karo.
Madaxweynuhu waa khabiir military oo ku soo tababartay Maraykanka, wuxuu tan iyo 1994kii ahaa Wasiirka Gaashaandhigga, waxaana lagu xantaa nin an jeclayn xorriyadda saxaafadda, laakiin wuxuu Ruwanda u yeelay, doorashooyinkii 2013kii ka dib, tirada haweenka xildhibaannada ah, (63%) ee ugu badan dunida.